डा. शशांक भन्छन्- ‘देउवालाई म बाहेक कसैले हराउन सक्दैन’ « Media for all across the globe
डा. शशांक भन्छन्- ‘देउवालाई म बाहेक कसैले हराउन सक्दैन’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको बताएका छन्। १४ औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार भए मात्रै देउवा पराजित हुने कोइरालाको जिकिर छ। पार्टी सभापतिका लागि अरू नेताहरूको दावी रहेपनि सभापति देउवालाई पराजित गर्ने ग्यारेण्टिका साथ आफ्नो दावी सभापतिमा रहने उनले बताए।
महामन्त्री कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिमा देउवालाई पराजित गर्न नसक्ने दावी गरे। “मैले धेरैसँग परामर्श गर्दैछु। उनीहरू तपाई नै उठ्नुपर्‍यो भन्छन्। तर रामचन्द्र दाई, सिटौला जी, प्रकाशमानलगायत धेरे हुनुहुन्छ, सबै उठेर भएन। हाम्रो लक्ष्य सबै मिलेर एक जना उठ्ने हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि आपसमा वार्ता गरेर हामी सबै एक ठाउँमा पुग्न सकियो भने सम्भव हुन्छ,” उनले भने, “व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई हराउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो म नै हुँ। रामचन्द्र दाईले पनि सक्नुहुन्न। अरु कसैले पनि सक्दैन। यो ग्यारेण्टीका साथ भन्न चाहान्छु म बाहेक शेरबहादुर जी लाई हराउने व्यक्ति नै छैन।”
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन लगायतका काम विधान विपरित गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। सभापति देउवाले पार्टीका विभागहरू गठन गरिरहेकोप्रति इतरपक्षले विरोध जनाउँदा पनि नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र जतिसुकै विरोध गर्दापनि सभापतिले कुरा नसुन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको जवाफ महाधिवेशनबाट दिनुपर्ने बताए।